Google Chrome yeIOS ikozvino yakavhurwa sosi | IPhone nhau
Google Chrome yeIOS ikozvino yakavhurwa sosi
Google Chrome rave iro rinonyanya kushandiswa mubrowser mune desktop nharaunda mumakore apfuura, kutora yakawanda musika mugove kubva kune ese Internet Explorer / Microsoft Edge neSafari. Mumusika wefoni, hapana dhata rekusimbisa kana kuramba kuti kushandiswa kweChannel paIOS kuri pamusoro pane kweSafari, asi nekuda kwekubatanidzwa neyekuzvarwa Safari ecosystem, Apple's browser inoshanda zvakanyanya kupfuura iyo Chrome imwe nzira. Ivo vakomana paGoogle vanoramba vachigadzirisa mwedzi wega wega vachiunza nyowani maficha mune yayo vhezheni yedesktop uye yemafoni.
Nhau dzichangoburwa dzakanangana neiyo Chrome browser ndeyekuti Google ichangobva kuiburitsa, ichiwedzera kodhi yayo kuChromium projekiti yekuchengetera, kuti chero mushandisi aigadzirise uye vagadzire avo vhezheni. Zvinoenderana neblog yeGoogle, iyo Chrome kodhi yeIOS yanga ichengetwa kunze kweiyo yese yeChromium projekiti nekuda kwekunetseka kunodiwa neApple nharembozha, sezvo iyo Cupertino-based kambani inoda izvozvo mabhurawuza ese akagadzirwa pamusoro peiyo WebKit inopa injini uye mune iyo Chrome zvakare neBlink, izvo zvaive zvakaomarara izvo zvavaida kunzvenga vasati vaburitsa kodhi.
Iko kushandiswa kweinjini mbiri kwakaomesa kuzvipira kweChannel kuvhura sosi, asi mushure memakore akati wandei vanogadzira vachishandisa kodhi vanozokwanisa kuumbiridza shanduro dzeIOS nedzimwe shanduro dzeChromium. Uku kufamba muGoogle zvechokwadi zvinoreva kufamba kwakakosha mukushandisa izvo zvichakurumidza kusvika kuApp Store muchimiro chebrowser kuwedzera kune zvinoshandiswa, senge manejimendi manejimendi, ayo zvakare ane akabatanidza browser, iro basa raro rinogona kuvandudzwa zvakanyanya nekushandisa kodhi yakaburitswa neGoogle kubva kuChannel yeIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Chrome yeIOS ikozvino yakavhurwa sosi
Vhura sosi asi nezvakavharwa ... chromium haisiriyo yayaimbove
Nehurombo haugone kuwana zvese.
Snapseed inovandudzwa yeIOS ichiwedzera chishandiso chitsva: makakombama
Apple zvakare inoputsa rekodhi yayo: 78,3 mamirioni ePhones akatengeswa